Chaja Rampow maka mkpa niile n'oge okpomọkụ a | Akụkọ akụrụngwa
Oge okpomọkụ na-abịa yana ya na njem. Nsogbu bụ mgbe anyị nọ n'oge a na-achịkọta ngwa niile anyị chọrọ maka njem ahụ, chaja kọmputa, chaja smartwatch, chaja ama ... Ezigbo ara! Ya mere, taa anyị na-egosi gị ụfọdụ ndị ọzọ.
Rampow bụ Asia ika emeputa nke ngwa nile di iche iche, na oge a anyị na-ewetara a ndepụta nke mbuaha chaja nwere ike soro gị n'oge okpomọkụ a. Chọpụta ụzọ atọ ndị a anyị gosipụtara gị nke nwere ike ịba uru iji zere ka akpa gị jupụtara na eriri.
1 Nbunye Ike na Ndenye Nchaji 3.0
2 Nzipu Ike 3.0 na rue 36W
3 Ndenye Nchapu 3.0 ruo 39W
Nbunye Ike na Ndenye Nchaji 3.0
Anyị na-amalite site na vasatail, chaja a nwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ, nnyefe Ike USB-C na Qualcomm USB-A Quick Charge 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a na - eme ka anyị nwee ike ruru 36W dabere na ngwaọrụ anyị na - eji. Nke a ga - enye anyị ohere ọ bụghị naanị iji kwụọ ụgwọ ngwaọrụ mkpanaka dịka iPhone ma ọ bụ Samsung Galaxy S20, mana anyị ga - enwe ike ịkwụ ụgwọ ụfọdụ laptọọpụ dịka MacBook Air ma ọ bụ Apple's MacBook. Ọ bụ ya mere anyị ji ekwu banyere chaja a ọsọ ọsọ dịka nke anyị ga-ekwu maka ya taa.
Jiri koodu I7AXQC5L ma ị ga-enwe ego 32%, nke ga-ahapụ ya na 13,79 euro. > B LTA njikọ
Enwere ike ịzụta chaja a na agba abụọ dị iche iche, ma ọcha ma oji, ọ bụ ezie na m na-akwado mgbe niile ka oji dị ogologo. Ọ nwere usoro nchebe megide nnukwu ụdị ụdị dị iche iche, yana sistemụ na-egbochi obere sekit iji gbochie ya iru ngwaọrụ mkpanaka anyị dị oké ọnụ ahịa. Ọ dị mkpa karịsịa ịnye ndị smartphones ezigbo chaja. Kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, anyị nwekwara sistemụ nchekwa nchekwa dị elu, ebe ọ bụ na ị na-ebu ụdị ngwa ngwa niile na-eme ka kpo oku kpụ ọkụ n'ọnụ na ụfọdụ ngwaọrụ.
Nzipu Ike 3.0 na rue 36W
Ugbu a, anyị na-ekwu maka "oge a" kachasị. A na-atụ aro ya karịsịa maka ịbudata ngwaọrụ mkpanaka nwere ọdụ ụgbọ USB-C. Site na ọdụ ụgbọ mmiri USB-C Power Delivery 3.0 ya abụọ, ọ nwere ike ịnye amps 3 maka ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla, si otú a nweta Ndenye Ndenye ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ 3.0. maka niile ngwaọrụ n'out oge. Ọ nwere usoro nchọpụta ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi, nke a pụtara na ọ ga-enwe ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na anyị na-ejikọta, dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ ma si otú a na-enye ya ike dị mkpa, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a anyị na-akwado iji naanị otu USB-C ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ gaghị enye ngwaọrụ ahụ ihe ma ọ bụ ihe na-erughị ike dị mkpa, ruo 30W n'otu oge.
Jiri koodu SD8VKNQB ma ị ga-enwe mbelata nke 35, ị nwere ike ịzụta ya naanị € 13,65> Zụta njikọ.
Dịka ngwaọrụ ndị ọzọ Rampow anyị na-ekwu maka taa, anyị nwere nchedo oke ibu, igbochi sekit dị mkpirikpi na oke okpomọkụ. Site na chaja a ruo 36W, anyị ga-enwe ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ ahụ 70% ngwa ngwa karịa ka anyị ga - eji kpochapụ 5W chaja nke ọtụtụ ngwaọrụ gụnyere. Ọzọkwa, Rampow na-enye ikikere "ndụ" niile akọwapụtara na kaadị ahụ etinye na ngwugwu ahụ. N'otu ụzọ ahụ dị ka ọ dị na ndị nrụgharị gara aga a kpọtụrụ aha n'isiokwu a, anyị nwere agba abụọ ịhọrọ n'etiti ọcha na oji, olee nke kachasị amasị gị?
Ndenye Nchapu 3.0 ruo 39W
Ugbu a, anyị na-ekwu maka ihe kachasị ike, chaja Rampow nke na-enye ikike 39W, nwere ike iji amamihe na-ewepụta ike dị mkpa ma ngwaọrụ ahụ enwere Ndenye Ndenye 3.0 ma ọ bụ na ọ bụghị. N'otu ụzọ ahụ, ọ nwere nchedo ọkụ na nguzogide oke okpomọkụ, anyị enweghị ike ịtụ anya obere site na ngwaahịa egosipụtara nke ike yiri ya. Ọ na-amasị m ịkwado mkpa ọ dị iji chaja emepụtara nke ọma mgbe ị na-ejikọ ngwaọrụ anyị, ebe ịchekwa ụdị ngwa a nwere ike iwe anyị nnukwu iwe.
RAMPOW Ndenye n'Aka 3.0 ...
Oge a ka anyị nwere ya naanị na oji, mana o nwere kọmpat kọmpat nke na-anaghị egbochi plọg ndị ọzọ, dịka ọ na-eme n'ụdị ndị ọzọ nke chaja buru ibu. Ọ na-arụkọ ọrụ na ụwa dịka iPhone 11 Pro ma ọ bụ Huawei Mate 30 Pro dịka ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Chaja Rampow maka mkpa niile n'oge okpomọkụ a